Obama: Khalaafada waxaan ku qaadeynaa weeraro sida Soomaaliya & Yemen ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxwaynaha Maraykanka Barack Obama ayaa balan qaaday in wadankiisu uu qaadi doono hawlgal millitari oo xiriir ah si ay u wiiqaan una baabi’iyaan malayshiyada Khilaafada Islaamiga ah (IS) ee horay loogu yaqaanay Daacish ama ISIS.
Isaga oo ka hadlaya khudbad uu Talafeshinka ka jeediyay Obama, waxa uu sheegay in Maraykanku uu hogaamin doono xulafo wayn oo ka soo horjeeda ururkaasi. Ururkaasi oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya.
Madaxwaynuhu waxa uu markii u horaysay amray in diyaaradaha Maraykanku ay duqaymo ka gaysan karaan gudaha Suuriya iyaga oo baacsanaya xoogagga khilaafada Islaamiga ah.
Obama ayaa ku celiyey in ciidamada Mareykanku aysan ka qeyb qaadan doonin dagaalka dhulka hase ahaatee ay cirka ka weerari doonaa dagaalyahanada Islaamiyiinta ah ee IS.
Wuxuu sheegay Obama in dagaalka ay ku qaadayaan saldhigayada IS ee Suuriya iyo Ciraaq uu noqon doono mid la mid ah dagaalka ay wadaan Soomaaliya iyo Yemen, halkaasoo diyaaradaha dagaalka Mareykanku duqeymo la beegsadaan madaxda Alshabaab iyo Alqaaciadada Jazeeradda Carabta, taageersana siiyaan dowladaha labadaas dal.
Khudbadda madaxweyne Obama ayaa kusoo beegantay sanad guuradii 13-aad ee kazoo wareegtay markii Alqaacidda 4 diyaaradood oo rakaab ah ku weerareen Mareykanka sanadkii 2011.